Lithini inqaku lemveliso yefoyile ye-allwinpack aluminium? | Jiahua
Lithini inqaku lemveliso yefoyile ye-allwinpack aluminium?
1.All iintlobo zokubalula, ungenziwa ngemfuneko ngokwemfuno zabathengi. Ubungakanani kunye nobunzulu banokukhetha-ukukwazi ukuhlangabezana neemfuno ezahlukeneyo.
2. Iifoyile zebakala lokutya isikhongozeli aivulwe yi-FDA kunye neKOSHER. Ukhuseleko kunye nempilo, ngokusebenzisa inzalo kumaqondo obushushu aphezulu. Njengoko kufanelekile ukunxibelelana nokutya ngokuthe ngqo, ke ukhuseleko kubaluleke kakhulu, i-aluminium foil container ayinabungozi emzimbeni womntu, sinokuyisebenzisa ngokukhululeka.
3. Ugqibelele pamandla emveliso kunye nobunzima, humgangatho we-igh kunye nembonakalo entle, ubunzima bokukhanya. Ngembonakalo eqaqambileyo, kulula ukuhombisa ukutya. Ngaphezu koko, kulula ukuyigcina kunye nokuphatha.
4.Gukhuselo lokusingqongileyo kunye nokuvuselelwa kwakhona, kunye nezinye iimveliso zealuminium, ngefoyile ye-aluminiyam inokusetyenziselwa ukuphinda isetyenziswe kwakhona.
5. AI-luminum foil tray inokusetyenziselwa ngokuthe ngqo ukugcina, ukupakisha, i-barbeque / baking, ukwakha, ukufudumeza kunye nokuqandusela, okusetyenziswa kakhulu kwicandelo lokubhaka, ukutya ngenqwelomoya, ukuthatha, ukutya okuphekiweyo, ii-noodles ezikhawulezayo, iibhokisi zasemini ezifanelekileyo kunye nokunye ukupakisha ukutya.